जापानमा नेपाली कर्मचारीहरूको आवश्यकता: तथ्य यो तथ्य हो? - Khabar Time
जापानमा नेपाली कर्मचारीहरूको आवश्यकता: तथ्य यो तथ्य हो?
शुक्रबार, पुष १३, २०७५
in English, Highlight, Videos, अन्तरर्वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय, अर्थ, कृषि, खेलकुद, जीवन शैली, धर्म संस्कृति, पत्रपत्रिका, पर्यटन, प्रदेश, प्रवास, प्रविधि, फोटो फिचर, बिशेष, बैंक / शेयर, मनाेरञ्जन, मुख्य समाचार, मोडल वाच, राजनीति, राष्ट्रिय, रोचक, विचार/ब्लग, शिक्षा, समाचार, समाज, साहित्य र कला, सूचना प्रबिधि, स्थानीय, स्वास्थ्य, हेडलाइन
काठमाडौं, काठमाडौं, केहि दिनहरूमा नेपाली खबरहरू आएको छ कि जापानले नेपालका लागि रोजगारीको अवसर खोलेको छ। जापानमा नेपाल, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, म्यांमार, कम्बोडिया, मंगोलिया जस्ता देशहरूले कामका लागि देशको रूपमा आफ्नो श्रमिक स्रोतलाई पहिचान गरेको छ र ती देशहरूबाट करिब4लाख कामदारहरू लिने योजनाहरू छन्।
राष्ट्रीय स्तर मा, मीडिया को अधिकांश नामहरु समाचार दिए छ कि नेपाल पहिलो प्राथमिकता मा सूची राख्दछ। यस्ता समाचारहरूको केही अनुच्छेदहरूले फेला पारेका छन् कि जवान मानिसहरू जसले रोजगारीको लागि विदेश जान चाहन्छन् जापानमा जान सकेन।
अर्कोतर्फ, केही मिडियाले कर्मचारीको विफलताद्वारा जापानमा जापानको रोजगारीको अवसर बारे खबर गरेका छन्। पहिले, जापानको कार्यबलको कारण, नेपाली कर्मचारीहरुका कार्यकर्ता यसबाट चिनिन्छन्, साथै समाचारहरू जुन तिनीहरूले पनि गर्न सक्छन्।
यस्तो मिडियाले जापानको कूटनीति र ठूलो रकम फिर्ता गर्ने विदेशी रकम परिवर्तन गर्न जापानको क्षमताबारे कुनै समाचार छैन भनेर थाहा पाउँछ र धेरै उत्साहित हुनेछैन।
जापानमा नेपाली वास्तविकता
जापानमा बस्ने 84,000 नेपालीहरू छन्। ती मध्ये एक, नेपाली विद्यार्थीहरू, भिषामा जापान पुगिसकेका छन् र अध्ययनको अध्ययन गरिरहेका छन्। जापान भिसा भ्रमण गर्ने विद्यार्थीहरूले हप्तामा 24 घण्टा काम गर्न सक्छन्।
अध्ययनको समापन पछि, यदि कुनै संस्थाले जापानलाई सेवा प्रदान गर्न तयार पत्रको साथ कम्पनी प्रदान गर्ने आवश्यकता थियो भने, जापानी आप्रवासले यस्ता व्यक्तिलाई परिवारसँग जापानमा रहन अनुमति दिए। यस्तो कर्मचारीलाई कम्पनीको मांग अनुसार जापानमा, एक वा तीन वा पाँच वर्षमा रहन अनुमति दिइएको छ।
जापानमा नेपाली बसोबासहरूको निपटानमा त्यहाँ विनाश, चिल्लाउने र विवाद भोग्नु पर्छ, र केहि नियमहरू तोडिएको छ।
जापान जाने अन्य मानिसहरू भान्सामा अधिक कुशल छन्। यदि कुनै होटल, रेस्टुरेन्ट वा कैंटीनले आफ्नो संगठनमा विशेष कुकी प्रस्ताव गर्दछ र व्यक्तिलाई वर्णन गर्न चाहानुहुन्छ भने यो व्यक्ति परिवारसँग जापान जान सक्छ।
जापानी विश्वविद्यालयमा पढाइएका विद्यार्थीहरू, जसले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय खोल्यो जस्तै, नेपालबाट यस्तो व्यंजन खाने खालका थिए। यी भेडाहरू पनि परिवारका सदस्यहरूसँग नजिक हुन सक्छन्।
तेस्रो-पीढी व्यक्तिले उच्च ऊँची एन्टिड टेक्नोलोजी लगाउँछन्। त्यसै गरी, जो जापानमा लगानी गरेर राम्रो आय कमाउँदै ती बाग्राहरू पनि हुन्। जापानमा हजारौं भन्दा बढी नेपालीहरूले यस्तो उच्च कुञ्जीहरूको कारण यस्तो राम्रो सेवा पाइरहेको छ। यस्ता व्यक्तिले परिवारको नजीक सदस्य लिन र प्रक्रिया पूरा गर्न एक जापानी नागरिकता लिन सक्दछ। यद्यपि जापान प्रशासन युरोप-अमेरिका जस्तै दीर्घकालीन विदेशी नागरिकहरूको मानसिकतामा देखा पर्दैन।
जापानी आप्रवासन विभागलाई धेरै बलियो मानिन्छ। यदि यी दुई अल्पसंख्यकहरूले जापान पुगिसकेका विदेशीहरूको गलत गल्ती वा उल्लङ्घन गरे भने, आप्रवासले घर फिर्ता गर्नेछ। यसबाहेक, अन्य सदस्य वा परिवारका आफन्तहरू जसले जापानमा बस्छन् विदेशीहरूलाई भनिन्, कुनै पनि गल्ती गर्दैन, र ती व्यक्तिहरू पनि तुरुन्तै घर फर्केर फर्किने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा आलोचना गर्छन्।
यी तीनवटा तीनवटा देशहरूसँग जापानले जापान समेत केही देशहरूको अधिकारमा जापान प्रवेश गर्यो। जापानी सरकारको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा, जेकको नाउँको एक जापानी कम्पनीले विदेशबाट प्रशिक्षण कार्यकर्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए।
जिन्कोले नेपाली किसानहरू र पशुधन उद्योगबाट पनि केही वर्ष अघि काम गर्ने कामदारलाई पनि नीति लिईएको थियो। यो नेपालमा एक महान समाचार थियो। यस्तो कामलाई पठाउन नेपाल सरकारलाई विदेशी रोजगार व्यवसायीहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विदेशी कर्मचारीहरूले मलेशिया, कतर वा सऊदी अरबलाई पनि यात्रा गरेका थिए साथै उनीहरूलाई जापानमा जापान पठाउँछन्। यसले जापानी सरकारको नीतिको साथ नेपालका विदेशी रोजगार चिकित्सकहरूको योजना प्राप्त गर्दैन।
यसको नतिजाको रूपमा, ठूलो समाचारहरू बनाइएको थियो, केही वर्ष भित्र प्रक्रिया पूर्ण असफल भयो। तर यस योजनाले भियतनाम र लाओस ‘जेडको’ कम्पनीको माध्यमबाट हजारौं प्रशिक्षु कार्यकर्ता पठाउन सक्षम भएको थियो जसले आन्तरिक प्रशिक्षणका कर्मचारीहरूको सुविधा पायो। कहिलेकाहीँ, जापानमा वियतनामीको संख्या सानो थियो र हजारौं भियतनामहरू अब देखिएका छन्।
त्यस्तै, लाओसको संख्या धेरै उच्च छ। नेपालको एउटै सुविधा प्राप्त भयो, त्यो शीर्षक केवल सय सय कार्यकर्ताहरू देखिन्छ। कार्यकर्ताको रूपमा प्रवेश गरेका थुप्रै प्रशिक्षकहरूले आफ्नो कार्य पूरा गरे।
जापानमा नेपाली छवि
जापानमा नेपाली संख्याहरू बढ्दै जाँदा, जापानीहरूले केही अवस्थामा असहज महसूस गरेका छन्। नेपाली निपटानमा गन्दा स्लाइसहरू, चिन्ता र विवाद हुनेछ, र केही नियमहरू भाँचिएका छन्। नेपाली मान्छे नेपाली क्षेत्रहरूमा दोषी विनाश प्रक्रियाको खोजी गर्दै छन्।
जापान लगभग एक दशकको लागि कार्यबलको कमीको सामना गर्दैछ। ग्रामीण र माछाहरु जस्तै गाँउहरु मा कार्यबल को कमी को कारण ग्रामीण क्षेत्र को अधिक युवा श्रमिकों शहरी क्षेत्रहरुमा रहछन।
यस घटनाको कारण, हरेक जापानी कर्मचारीको रूपमा सकारात्मक रहेको भए जापानी
मेलबर्नमा स्यान्डेपको पहिलो जित
साहित्यकार महोत्सवमा 24-बिन्दु प्रवृति आयोजित भएपछि महानगरीय तिरुआइलाई तिर्नेछ